PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - Uzimisele ukungenisa imali ezinkampanini zikahulumeni
Uzimisele ukungenisa imali ezinkampanini zikahulumeni
ISAZI somnotho sakwa-Old Mutual, uMnuz Dave Mohr, sithi ukuqokwa kwamalungu amabhodi amasha ezinkampanini zikahulumeni kukhombisa ngokusobala ukuthi uNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni, uMnuz Pravin Gordhan, uzimisele ukungenisa imali kulezi zinkampani.
NgoLwesibili uGordhan uthe uzoshintsha isimo ezinkampanini zikahulumeni aqinisekise ukuthi imali elahleke kuzo iyabuya.
Uthe ibhodi elidala lakwaTransnet bekufanele ligudluke ngoba lihlulekile wukuthatha izinyathelo ngokumoshwa kuka-R54.5 billion wokuthenga izitimela.
UMohr uthe sekuyisikhathi sokuthi izinkampani zikahulumeni zipheze ukukleliswa njengezinkampani ezingathembekile kubatshalizimali ziyeke ukutakulwa futhi zenze inzuzo.
Uthe ukushintshwa kobuholi enkampanini kahulumeni eyakha izikhali iDenel nakho kuzobuyisa ithemba kubatshalizimali uMengameli Cyril Ramaphosa afuna ukubaheha ukuze kukhule umnotho.
Amazwi akhe ananelwe yiBusiness Leadership South Africa (BLSA) ethe uhulumeni wenza kahle ngokuqoka abaholi abangalandelwa yifu elimnyama kumabhodi ezinkampani zakhe.
Isikhulu esiphezulu seBLSA, uMnuz Bonang Mohale, sithe siyakwamukela ukuhlakazwa kwebhodi leTransnet ngoba lokhu kukhombisa ukuthi uGordhan yindoda enesibindi sokushintsha izinto.
“Kuyasijabulisa singosomabhizinisi nezikhulu zezinkampani ezinkulu ukubona uGordhan eshintsha ubuholi bamabhodi ezinkampani zikahulumeni. Siyajabula kakhulu ngokuqokwa kwabaholi abasha e-Eskom, Transnet, Denel nezinye izinkampani zikahulumeni. Siyakuqonda ukuthi uGordhan ubengeke alishiye ngaphandle ibhodi lakwaTransnet. Sicela aqoke abantu abanamakhono okuphatha imali, obunjiniyela, ezomthetho, okuphatha kahle izinkampani nemisebenzi emikhulu,” kusho uMohale.
Uthe izinguquko ezenzeka ezinkampanini zikahulumeni zibanika isibindi sokucela ozakwabo bakwamanye amazwe ukuthi bazotshala imali eNingizimu Afrika ngoba uGordhan uzimisele ngokushintsha isimo.
“Sifuna iqale ikhomishini yeJaji Raymond Zondo yokuphenya ngokulawulwa kombuso yidlanzana ikakhulu ezinkampanini zikahulumeni. Abazotholwa ukuthi baphula umthetho sifuna bajeziswe ukuze bangaphinde basebenzise izinkampani zikahulumeni ukufeza izinhloso zabo,” kusho uMohale.
Nalu uhlu loSihlalo bamabhodi ezinkampani zikahulumeni
-Eskom noTelkom Dkt Jabu Mabuza
-Prasa Nksz Khanyisile Kweyama osabambile -Denel Nksz Monhla Hlahla -Transnet Mnuz Popo Molefe -SAA Mnuz Johannes Bhekumuzi Magwaza odume ngoJB
Umhlaziyi wepolitiki ozimele, uMnuz Thabani Khumalo, uthe ubezilindele kuGordhan izinguquko emabhodini ezinkampani zikahulumeni.
“Selokhu aqokwa ngoFebhuwari uGordhan wakubeka kwacaca ukuthi uzokhuculula izinto ezinkampanini zikahulumeni. Unomsebenzi omkhulu ngoba umonakalo owenzekile ngoweminyaka ewu-10 ezinkampanini zikahulumeni. UGordhan ungumuntu ofanelekile ukwenza lo msebenzi ngoba unesibindi futhi uzimisele ukuvusa izinkampani eziwayo zikahulumeni,” kusho uKhumalo.
Uthe labo abangahambisani nezinguquko zikaGordhan kufanele basheshe bahambe ngoba ngeke ababekezelele.